Madaxweynaha Kenya oo la kulmay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweynaha Kenya oo la kulmay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta oo Arbaca ah la kulmay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho uu ku tagayo saddex dal oo Afrikaan ah.
Kulanka maanta oo ka dhacay Aqalka Madaxtooyada ee Nairobi, ayaa daba socday wadahadal uu Madaxweyne Kenyatta kula yeeshay dhiggiisa Mareykanka Joe Biden magaalada Washington DC bishii hore, waxaana looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin Covid-19, isbeddelka cimilada iyo, gobolka. nabada iyo amniga.
Madaxweyne Kenyatta ayaa uga mahadceliyey dowladda Mareykanka taageerada horumarineed ee ay si joogto ah u siiso Kenya gaar ahaan dhanka caafimaadka, waxaana uu mar kale ku celiyay Kenya rabitaanka qotoda dheer ee ah in ay noqoto xarun wax soo saar ah oo tallaalka iyo saadka ah ee gobolka.
Isbeddelka cimilada, Madaxweynaha, ayaa mar kale soo dhaweeyay ku laabashada Dowladda Mareykanka ee Heshiiskii Paris isagoo sheegay in Kenya ay aad u daneyneyso inay Mareykanka kala shaqeyso horumarinta ajendaha cimilada.
Dhankiisa, Xoghaye Blinken waxa uu qiray horumarka baaxadda leh ee ay Kenya ka samaysay hawlaha cimilada gaar ahaan qaadashada xalalka tamarta cagaaran isagoo sheegay in Maraykanku uu aad u danaynayo in uu sahamiyo fursadaha cusub ee iskaashiga.
Madaxweyne Kenyatta iyo Xoghaye Blinken ayaa sidoo kale ka hadlay nabadda iyo amniga gobolka, waxayna sahmiyeen fursado cusub oo iskaashi si loo xalliyo colaadaha gobolka ka socda iyo sidii nabad waarta loogu heli lahaa Geeska Afrika.
Wafdiga Mareykanka ee booqashada ku jooga dalka Kenya oo uu hoggaaminayo Xoghaye Blinken ayaa gelinka dambe ee Arbacada waxa ay wada-hadallo laba geesood ah la yeelan doonaan dhiggooda Kenya oo ay hoggaamineyso Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Kenya, Amb Raychelle Omamo.
Previous articleKursiga Xildhibaan Xuseen Iidow oo Halis ku jira iyo Villa Soomaaliya oo Qorshe cusub wada
Next articleNISA oo duleedka Muqdisho ku qabatay qarax Miino ahaa.
Shir ay isu’gu yimaadeen Nabaddoonada Jifida Xuseen Cismaan ee Bahgareen (Cismaan Maxamuud), oo ay kaga hadlayeen xubinka Golaha Shacabka Baarlamanka Federaalka Soomaaliya, kadib markii...